မေတ္တာ ဘာဝနာ ပွားများနည်း | မေတ္တာရိပ်
← မေတ္တာနှင့် ဒေါသ
၀ိပဿနာဘာဝနာ အားထုတ်ရခြင်း အကြောင်းရင်း →
မေတ္တာ ဘာဝနာ ပွားများနည်း	Posted on October 24, 2009	by mettayate မေတ္တာမရှိလျှင် ဆင်းရဲသူကိုမြင်၍ သနားသော ကရုဏာနှင့် ချမ်းသာသူကိုမြင်၍ ၀မ်းမြောက်သော မုဒိတာလည်း မဖြစ်နိုင်တော့ပါ။
– မေတ္တာ = သူတစ်ပါးကို ကောင်းစေချင်သော စေတနာ။
– ကရုဏာ = သူတစ်ပါးကို သနားကြင်နာခြင်း။
– မုဒိတာ = သူတစ်ပါး ကောင်းစားတာကို ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ခြင်း နှင့် စိတ်ဆင်းရဲလျှင် ထပ်တူထပ်မျှ မျှဝေခံစားခြင်း။
– ဥပေက္ခာ = ချစ်ခြင်း၊ မုန်းခြင်း မဟုတ်သော။ အလယ်အလတ်၌ ရပ်တည်ခြင်း။
မေတ္တာပွားများသူသည် မြည့်နေအောင် ထက်တဲ့ နှစ်ဘက်သွားလှံနှင့် တူတယ်လို့ မြတ်စွာဘုရားက သံယုတ်ပါဠိတော်ကြီးမှာ ဟောထားပါတယ်။ အဲ့ဒီလှံသွားကို ချိုးမယ် ခေါက်မယ် လိပ်မယ်ဆိုပြီး လုပ်ရင်လုပ်တဲ့သူသယ ရှမှာပဲ။
ဒါကြောင့် မေတတ္တာပွားများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကို ဘယ်အမနုဿကမှ မထိရဲဘူး။
မေတ္တာဘာဝနာ မှာ ဋ္ဌာန်လေးချက်
ဟိတာကာရ ပိတ္တိလက္ခဏ မေတ္တာ
သတ္တာနံ မနာပဘာဝဒဿန ပဒဋ္ဌာနာ
မေတ္တာရဲ့ လက္ခဏာက သက်ရှိသတ္တ၀ါမှန်သမျှရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို ကျင့်ဆောင်ခြင်းတဲ့။ မိဘအပေါ်မှ သားသမီးအပေါ်မှ မဟုတ်ဘဲ သက်ရှိ သတ္တ၀ါတိုင်းရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို ကျင့်ဆောင်မှသာ မေတ္တာဘာဝနာအစစ်လို့ မှတ်နိုင်ပါတယ်။
မေတ္တာရဲ့ပြုလုပ်တတ်တဲ့ကိစ္စက အာဃာတကို ပယ်ဖျောက်ပေးခြင်းပါပဲ။
မေတ္တာရဲ့ထင်ရှားတဲ့ အခြင်းအရာက စိတ်ထဲမှာ အမြဲတမ်းအေးမြငြိမ်းချမ်းနေတာပါပဲ။
မေတ္တာဖြစ်ခြင်းရဲ့အနီးဆုံးအကြောင်းက သတ္တ၀ါတို့ရဲ့ ကောင်းကွက်ကို ရှာကြံကြည့်ရှုတတ်ခြင်းပဲ။
မေတ္တာဘာဝနာပွားများလိုသူသည် အကျင့် ၁၅ မျိုးကို မိမိသန္တာန်မှာရှိအောင် ကြိုးစားရမည်။
၁) သက္ကော = စွမ်းနိုင်သူ ပဓါနိယင်္ဂတရားငါးပါး နှင့် ပြည့်စုံသူ ဖြစ်ခြင်း
၂) ဥဇုစ = ၀စီနှုတ်ထွက် တော်မှန် ဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြင့် အချင်းချင်းလှည့်ပတ်လှည့်စားခြင်းစသော မုသားပြောဆိုးခြင်းမှ ရှောင်ကြည်ခြင်း။
၃) သုဟုဇုစ = ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲမှု မရှိစေရ။ အလွန်ဖြောင့်မတ်ရမည်။ ရေမြင်ရေလွှမ်း၊ ကြာမြင်ကြာလွှမ်းဆိုသကဲ့သို့ တွေ့ရာမြင်ရာ အာရုံတိုင်း၌၀င်၍ စိတ်ပါဝင်စား အကုသိုလ်မပွားရ။ ဆင်ခြင်တုံတရား ယောနိသောမနသိကာရအားဖြင့် သင့်တင့်လျောက်ပတ်သောတရားကို နှလုံးသွင်းရမည်။
၄) သုဝစောစ = ပြောဆိုဆုံးမရာ၌ ကြီးငယ်မဟူ ၀န်ခံလွယ်သူ၊ နာယူလွယ်သူ၊ ပြုပြင်ဖို့ မခက်သူ ဖြစ်စေရမည်။
၅) မုဒုစ = ကိုယ် နှုတ် နှလုံး သုံးပါးလုံး နူးညံ့ပျော့ပျောင်းသိမ်မွေ့သူ ဖြစ်ရမည်။
၆) အနုတိမာနိစ = မာနထောင်လွှားသူ မဖြစ်စေရ။
၇) သန္တုဿကောစ = ရှိသမျှနှင့် ရောင့်ရဲတင်းတိမ်လွယ်သူ ဖြစ်စေရမည်။
၈) သုဘရောစ = မွေးမြူလွယ်သူဖြစ်စေရမည်။ ဤနေရာ၌ သူတစ်ပါးတို့၏ ကူညီပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းကို ခံယူသူဖြစ်လျှင် အပြုအစု မခက်ခဲသူ၊ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး၌ မခက်သူ ဖြစ်စေရမည်။
၉) အပ္ပကိစ္စေစ = ဗာဟီရ၊ ပလိဗောဓနည်းပါးသူ ဖြစ်ရမည်။
၁၀) အပ္ပကိစ္စောစ = အသက်မွေးပေါ့ပါး၊ ချောင်ချိသူ ဖြစ်စေရမည်။ အကျင့်ဇာမချဲ့သူ၊ ကိန်းမကြီးသူ၊ ပေါ့ပါးသွက်လက်သူ ဖြစ်စေရမည်။
၁၁) သန္တိန္ဒြိယောစ = မျက်စိ၊ နား စသော ဣနြေ္ဒခြောက်ပါး စောင့်စည်းထိန်းသိမ်းသဖြင့် သိမ်မွေ့ငြိမ်သက်တည်ကြည်အေးချမ်းသူ ဖြစ်စေရမည်။
၁၂) နိပကောစ = ဉာဏ်ပညာအမြော်အမြင်၊ အကြံအစည်၊ အကျင့်ဟူသော လောကရေး၊ ဓမ္မရေးတို့၌ မိမိနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် အကျိုးမဲ့မဖြစ်စေရန် ရင့်ကျက်သောဉာဏ်ရှိသူဖြစ်အောင် ကြိုးစားရမည်။
၁၃) အပဂဗ္ဘောစ = ကိုယ် နှုတ် နှလုံး သုံးပါးမြင့်မောက်တက်ကြွမှု မရှိစေရ။ ကြီးသူကိုရိုသေခြင်း၊ တန်းတူကို လေးစားခြင်း၊ ငယ်သူကို သနားခြင်း အကျင့်ရှိရမည်။
၁၄) ကုလေသွနာနုဂိဒ္ဓေါ = အဆွေအမျိုး၊ ဒကာ ဒကာမအစွဲ၊ ယောဂီအပေါင်းအဖော်အစွဲ၊ ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ၊ ဒေသစွဲ ကင်းစေရမည်။
၁၅) နစခုဒ္ဒမာစရေကိဉ္စိ ယေန၀ိညူပရေ ဥပ၀ဒေယျံ = ပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ ကဲ့ရဲ့မည့် သေးငယ်သောအပြစ်(လူမြင်ကွင်း၌ သိက္ခာမဲ့သောအလုပ် အသေးအဖွဲကိုပင်) မပြုကျင့်ရဟု ဘုရားရှင်ဆုံးမတော်မူခြင်း ဖြစ်သည်။
ဖော်ပြပါ အကျင့်း ၁၅ မျိုးကို အပြည့်အစုံမကျင့်နိုင်သော်လည်း မေတ္တာပွားများလို့ ရပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ထိရောက်မှုကတော့ ကွာပါလိမ့်မယ်။ တကယ့်သဒ္ဓါတရားနဲ့ ၀ီရိယရှိရှိပွားများမယ်ဆိုရင် မိမိလိုရာဆန္ဒပြည့်ဝနိုင်ပါတယ်။
မေတ္တာပေါက်ရန် အင်္ဂါ (၈) တန်
၁) အာသေ၀ိတ = မိမိမှာဖြစ်သော မေတ္တာစိတ်ကို ပျက်မသွားရအောင် တရိုတသေ ဂရုတစိုက် ရှိစေရမည်။
၂) ဘာဝိတ = မေတ္တာစိတ်လျော့မသွားသေဘဲ တိုးပွားလာအောင် လုပ်ရမည်။
၃) ဗဟုလီကတ = မေတ္တာကို တစ်ခါတလေသာမက အကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားစေရမည်။
၄) ယာနီကတ = မေတ္တာကို စီးစရာယာဉ်လို သဘောထားပြီး မိမိသွားရာ မေတ္တာအမြဲပါရမည်။
၅) ၀တ္ထုကတ = မေတ္တာသည် ငါ၏တည်ရာမှီရာဟု စိတ်စွဲထားရမည်။
၆) အနုဋ္ဌိတ = မေတ္တာကို ရှေ့သွားပြုရမည်။ ဘယ်သွားသွား ဘာလုပ်လုပ် မေတ္တာကို ရှေ့ကထားရမည်။
၇) ပရိစိတ = မိမိဝန်းကျင်မှ မေတ္တာစိတ်ဖြင့် ရံထားရမည်။
၈) သုသမာရဒ္ဓ = ကောင်းစွာပြုရမည်။ ကောင်းစွာ အားထုတ်ရမည်။
ဤ အင်္ဂါ ၈ ပါးနှင့်အညီ ပွားများထားသော မေတ္တာဘာဝနာသည် မိမိကိုလည်း ချမ်းသာစေသည်။ သူတစ်ပါးကိုလည်း ချမ်းသာစေသည်။ မိမိကိုလည်း ဘေးကင်းစေသည်။ သူတစ်ပါးကိုလည်း ဘေးကင်းစေသည်။
မေတ္တာဘာဝနာ ပွားကျိုး (၁၁) မျိုး
၁) ချမ်းချမ်းသာသာ အိပ်ရခြင်း၊
၂) ချမ်းချမ်းသာသာ နိုးရခြင်း၊
၃) အိပ်မက်ကောင်းကိုသာ မြင်မက်ခြင်း၊
၄) လူမှန်သမျှက ချစ်ခင်ခြင်း။
၅) နတ်မှန်သမျှက ချစ်ခင်ခြင်း၊
၆) နတ်မှန်သမျှက စောင့်ရှောက်ခြင်း၊
၇) မီး၊ အဆိပ်၊ ဓါး စသည်တို့ မကျရောက်ခြင်းမှာ ပွားနေနေသော အချိန်အတွင်းသာ။
၈) လျင်မြန်စွာ သမာဓိရခြင်း၊
၉) ရွှင်ကြည်လန်းဆန်းသော မျက်နှာရှိခြင်း၊
၁၀) မတွေမဝေ သတိရှိရှိသေရခြင်း၊
၁၁) ဗြဟ္မာပြည်သို့ လားရခြင်း။
၀ိပဿနာ အားထုတ်သူလည်း မေတ္တာဘာဝနာ ပွားများသင့်သည်။ ဗုဒ္ဓကလက်ထက်က ရဟန်းငါးရာသည် တောတွင်း၌ ၀ိပဿနာ တရားအားထုတ်ကြသည်။ သို့သော် မေတ္တာမပွားများခြင်းကြောင့် ရဟန်းများရောက်ခြင်းကြောင့် အောက်ဆင်းပေးကြသော ရုက္ခစိုးနတ်များနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်များစွာက မကျေနပ်သောကြောင့် ခြောက်လှန့်ကြလေ၏။ ဗုဒ္ဓက မေတ္တာဘာဝနာရင် ညွှန်ကြားပြီး ရဟန်းများလည်း မေတ္တာဘာဝနာပွားများရာ အနှောင့်အယှက်မှ ကင်းဝေလေ၏။
ပါဠိကို နှုတ်ကဆိုပွားခြင်းထက် နားလည်သော မြန်မာပြန်ကို စိတ်ထဲကဆိုခြင်းက ပိုထိရောက်၏။
တောင်တန်းဆရာတော်ကြီး၏ မေတ္တာပို့ခြင်း၏ အဓိကစာသားကား –
“လူ၊ နတ်၊ ဗြဟ္မာ သတ္တ၀ါအားလုံး ဘေးရန်ကြောင့်ကျ ဆင်းရဲကင်း၍ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ချမ်းသာကြပါစေ။ ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒ ပြည့်ဝကြပါစေ” ဟူ၍ ဖြစ်သည်။
လူဆိုလျှင် လူသားအားလုံးကို စိတ်ထဲက မြင်နေရသည်။
နတ်နှင့် ဗြဟ္မာ ဆိုရင်လည်း နတ်အားလုံး ဗြဟ္မာ အားလုံး ကို စိတ်ထဲက မြင်နေရသည်။
သတ္တ၀ါ သည် ငရဲ၊ တိရစ္ဆာန်၊ ပြိတ္တာ၊ အသူရကာယ်၊ အပါယ်လေးဘုံသား အားလုံးကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ထိုကြောင့် အပါယ်လေးဘုံသား အားလုံးထံ ရောက်သွားရမည်။
ဘေးရန်ကြောင့်ကျ ဆင်းရဲကင်း၍ ဆိုသည်ကား ဘေးရန်ကင်းကြပါစေ။ ကြောင့်ကျကင်းကြပါစေ၊ ဆင်းရဲကင်းကြပါစေ ဟု အကျယ်သိရမည်။
လူမမာတစ်ဦးဦးကို ဥဒ္ဒိဿ = ရည်စူးသောမေတ္တာပို့လိုလျှင် လူမမာ၏မျက်နှာကို စိတ်ထဲတွင်ပေါ်လာအောင် အာရုံယူပြီးလျှင် အောက်ပါအတိုင် လူမမာမျက်နှာပြုံးလာသည်အထိ မေတ္တာပို့ပါ။
ကို/မ …. သည် ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ချမ်းသာပါစေ။ ဘေးရန်ကင်းပါစေ၊
မေတ္တာ ပို့သည့်အခါ –
မိမိကိုယ်က အဦးစ၍ ပို့ရသည်။
ထို့နောက် အချစ်ဆုံး (သို့) ကျေးဇူးအများဆုံးပုဂ္ဂိုလ်
ထို့နောက် မချစ်မမုန်းသော အလယ်အလတ်ပုဂ္ဂိုလ်
ထိုအဆင့်များကို ပိုင်နိုင်ပြီးလျှင် ဝေရီ (ခေါ်) ရန်သူကိုပါ ပွားပို့ရသည်။
– အရှေ့အရပ်၌ရှိကြကုန်သော [အနန္တစကြာဝဠာ၊ အနန္တသတ္တ၀ါတို့ (ဘေးရန် ခပ်သိမ်းကင်းငြိမ်းကြပါစေ၊
ဒေါသ ခပ်သိမ်းကင်းငြိမ်းကြပါစေ၊ ဆင်းရဲ ခပ်သိမ်းကင်းငြိမ်းကြပါစေ၊ နှလုံး စိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေ။) ]
– အနောက် အရပ်၌ရှိကြကုန်သော [ …. ]
– မြောက် အရပ်၌ရှိကြကုန်သော [ …. ]
– တောင် အရပ်၌ရှိကြကုန်သော [ …. ]
– အရှေ့တောင် အရပ်၌ရှိကြကုန်သော [ …. ]
– အနောက်မြောက် အရပ်၌ရှိကြကုန်သော [ …. ]
– အရှေ့မြောက် အရပ်၌ရှိကြကုန်သော [ …. ]
– အနောက်တောင် အရပ်၌ရှိကြကုန်သော [ …. ]
– အောက် အရပ်၌ရှိကြကုန်သော ထက်ဝန်းကျင် အနန္တစကြာဝဠာ၊ အပါယ်ဘုံသား၊ အနန္တသတ္တ၀ါတို့ ( …. )
– အထက် အရပ်၌ရှိကြကုန်သော ထက်ဝန်းကျင် အနန္တစကြာဝဠာ၊ အနန္တ နတ်ဗြဟ္မာ တို့ ( …..)
ထက်ဝန်းကျင်သဒ္ဒါပါသင့်ပုံကို ဆရာတော်ရှင်းပြပုံမျာ – ထက်ဝန်းကျင်မထည့်ရင် အောက်အရပ်၌ရှိကြကုန်သော အနန္တစကြာဝဠာလို့ဆိုလိုက်ရင် ဒီစကြာဝဠာအောက်မှာ အနန္တစကြာဝဠာတွေ တစ်တိုက်ပြီးတစ်တိုက်ရှိတယ်လို့ အဓိပ္ပါယ်ရောက်တယ်။ မဟုတ်ဘူး။ အမှန်က ဒီစကြာဝဠာမှာ အခုမြေအောက်မှာ ရေရှိတယ်။ ရေအောက်မှာ လေရှိတယ်။ လေအောက်မှာ အဇဋာကာသဆိုတဲ့ ကောင်းကင်ကြီးပဲရှိတယ်။ အောက်မှာ စကြာဝဠာတိုက်မရှိဘူး။ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ စကြ၀ဠာအနန္တရှိတယ်။ ထက်ဝန်းကျင်ဆိုတာ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကို ဆိုလိုတယ်။
အရပ် ၈ မျက်နှာပွားတုန်းက မိမိတို့လူတွေ တပြင်တည်းနေတဲ့လူတေါကိုသာ အာရုံရောက်ပြီး အပါယ်ဘုံသားတွေမပါဘူး။ ထို့အတူ အထက်က နတ် ဗြဟ္မာတွေ အာရုံထဲမှာ မရောက်ဘူး။ ဒါ့ကြောင့် အောက်အရပ် အထက်အရပ်ကိုပါ ပွားရတယ်။ အထက်အရပ်၌ရှိသော အနန္တစကြာဝဠာမှာ ထက်ဝန်းကျင်ထည့်တာလဲ ဒီအတိုင်းပဲ။ ဒီထက်ဝန်းကျင်မထည့်ရင် ဒီစကြာဝဠာအထက်မှာ စကြ၀ဠာတိုက်တွေ အနန္တစကြာဝဠာလို့ ထင်သွားမယ်။ အဲ့ဒီလိုမထင်အောင် ထက်ဝန်းကျင် ဘေးပတ်ပတ်လည် အနန္တစကြာဝဠာ အနန္တနတ်ဗြဟ္မာတို့ …။ ဒါကို ဒိသာဖရဏမေတ္တာလို့ ခေါ်တယ်။
၁) လုံးစုံများစွာ (သတ္တ၀ါ ချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ။ ဥပါဒါရန်ဘေး ကင်းစင်ဝေး ငြိမ်းအေးကြပါစေ။)
၂) ကြောက်တတ် မကြောက်တတ် နှစ်ရပ်များစွာ ( …..) ကြောက်တတ်အရ = ပုထုဇဉ်၊ သောတာပန်၊ သကဒါဂါမ် တို့ကိုယူရမည်။
မကြောက်တတ်အရ = အနာဂါမ်၊ ရဟန္တာ၊ ဒေါသပါယ်ပြီးသော ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှ တို့ကို ယူရမည်။
၃) မြင်အပ် မမြင်အပ် နှစ်ရပ်များစွာ ( …..) မြင်အပ်အရ = လူ တိရစ္ဆာန် တို့ကိုယူ။
မမြင်အပ်အရ = နတ်၊ ဗြဟ္မာ၊ ငရဲ၊ ပြိတ္တာ၊ အသူရာကာယ်များကို ယူ။
၄) ဝေးနေ နီးနေ နှစ်ထွေများစွာ ( …..)
၅) ဘ၀ဇာတ်ဆုံး မဆုံးများစွာ ( …..) ဘ၀ဇာတ်ဆုံးအရ = ရဟန္တာမှစ၍ နောက်ထပ်ဘ၀မကူးကြတော့သော ပုဂ္ဂိုလ်များ။
ဘ၀ဇာတ်မဆုံးအရ = ပုထုဇဉ်၊ သောတာပန်၊ သကဒါဂါမ်၊ အနာဂါမ်။
၆) ရှည် တို အလတ် သုံးရပ်ခန္ဓာ ( …..)
၇) ကြီး ငယ် အလတ် သုံးရပ်ခန္ဓာ ( …..)
၈) ဆူကြုံ အလတ် သုံးရပ်ခန္ဓာ ( …..) ဆူဆိုသည်မှာ ၀သောသတ္တ၀ါ၊ ကြုံ့ဆိုသည်မှာ ပိန်သောသတ္တ၀ါ၊ အလတ်ဆိုသည်မှာ မပိန် မ၀ အနေတော်သတ္တ၀ါများ။
၉) လူအချင်းချင်း လှည့်ပတ်ခြင်း ကင်းရှင်းကြပါစေ။
၁၀) အထင်သေးချင်း အချင်းချင်း ကင်းရှင်းကြပါစေ။
၁၁) ဆင်းရဲလိုခြင်း အချင်းချင်း ကင်းရှင်းကြပါစေ။
မစိုးရိမ်ပဋ္ဌာန်းဆရာတော် ဦးဝိသုဒ္ဓါဘိဝံသ၏ မေတ္တာပို့
မျက်နှာသစ်ခါနီး တွင် ရေတစ်ခွက်ကိုခပ်ပြီးသည်နှင့် မသောက်သေး၊ မချိုးသေး၊ မျက်နှာမသစ်သေးဘဲ ခွက်ထဲမှ ရေကိုကြည့်ပြီး စိတ်ထဲမှ ဤကဲ့သို့ မေတ္တာပို့ပါ။
ငါအေးမြသလို ငါ့ကို ချစ်သူများလည်း အေးမြကြပါစေ၊
ငါ၏ ရှေ့တူရူအရပ် (သွားမည့်နေရာ) ၌ ရှိကြသော နတ် လူ သတ္တ၀ါအားလုံးတို့သည်ေ)ဘးရန်ကြောင့်ကြ ဆင်းရဲခြင်းကင်း၍ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ချမ်းသာကြပါစေ ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒ ပြည့်ဝကြပါစေ) ဟု စိတ်ထဲက အာရုံညွတ်စေပြီး မနောကံြောမက်အောင် (စိတ်ပါ လက်ပါ) မေတ္တာပို့ပါ။
ငါ၏ အနောက်အရပ်၌ ၌ ရှိကြသော နတ် လူ သတ္တ၀ါအားလုံးတို့သည် (…)
ငါ၏ ၀ဲအရပ်၌ ရှိကြသော နတ် လူ သတ္တ၀ါအားလုံးတို့သည် (…)
ငါ၏ ယာအရပ်၌ ရှိကြသော နတ် လူ သတ္တ၀ါအားလုံးတို့သည် (…)
ထိုခရီးလမ်းတစ်လျှောက်၌ မိမိအား ဘေးအနှောင့်အယှက်မရှိ။ ဘေးရန်အန္တရာယ်ကင်းသည်။ ကောင်းမွန်ချောမောစွာ ခရီးပြီးဆုံးမည်။ ရောက်ရာဒေသတိုင်း၌တွေ့ကြုံသူများက ချစ်ခင်လိုလားစွာနှင့် ကြိုဆိုနေကြောင်း တွေ့မြင်ရမည်။
၁) တို့အိမ်တွင်းမှာ (များသတ္တာ ချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ။)
၂) တို့ရွာတွင်းမှာ (…….)
၃) တို့မြို့တွင်းမှာ (…….)
၄) တို့နိုင်ငံတွင်းမှာ (…….)
၅) တို့ကမ္ဘာတွင်းမှာ (…….)
၆) တို့စကြာဝဠာတွင်းမှာ (…….)
၇) အနန္တစကြာဝဠာ များသတ္တာ ချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ။
အညွန်း- မေတ္တာအစွမ်းအံ့မခန်း၊ မြန်မာတို့၏အသက်။
This entry was posted in ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ and tagged ထေရ၀ါဒ. Bookmark the permalink.	← မေတ္တာနှင့် ဒေါသ